China Led Corn Cob Ìhè China Manufacturers & Suppliers & Factory
Led Corn Cob Ìhè - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Led Corn Cob Ìhè)
Mmiri mmiri E27 30W Led Corn Cob
Min. Nhazi: 10 Piece/Pieces
A na-emepụta Led Corn Cob ndị a na-enweghị mmiri iji kwupụta otu ìhè dị ka ihe nchekwa ha na-ekpuchi HIGH mgbe ha na-eji nanị pasent nke ike oriri. Led Corn Cob Ìhè na- enyo gbaa ọkụ kpamkpam ma dịruo ogologo oge karịa ngwongwo metal na nnukwu oriọna nke sodium iji nyere gị aka ịchekwa ego na ego efu. Ezubere iji...
100 Watt Led Corn Cob Light Bulb DLC
Bbier 100 Watt Led Corn Cob Ìhè ọ dị mfe iji wụnye ihe ngwọta LED maka post top na akwa elu mmiri. Ndị a 100B Led Corn Light Bulb na-enye ike iji nweta ume na-eme ka a na-agbanye aka na nnukwu ọkụ ọkụ dị elu. Anyị nwere ike iji 100 Watt Led Corn Light nwere ike ịmepụta ihe. Mbido ọka ọka e26 dị na okpomọkụ 4000K na...
Ngwaahịa dị 150 Watt Led Corn Bulb
Bbier 150 Watt Led Corn Lamp nwere arụmọrụ na-adịte aka ma na-adabere na ya. Na mgbakwunye na ịmepụta ìhè dị ka HID, nke a 150W Led Corn Lamp na-enye ezigbo mma nke ìhè, nke na-egosi nsụgharị nsụgharị nke agba (CRI) nke 80. Anyị 150W Corn Led Bulb dị mma maka iji na-emeghe ma na-emechi ihe eji eme ihe, a na-eme ka isi...
Led Akara 600w 130lm / w
Nsonaazụ dị elu a na-enye Led Haske 600w 130lm / w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. Ibe Chapu 600w 130lm / w LED dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Ubochi Iju Mmiri a bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri....
Led Akara 500w 130lm / w
Esemokwu a dị elu nke Led 500w 130lm / w nwere ngụgụ nke 65,000lumens. Chapleti 500w 130lm / w LED dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Ubochi Iju Mmiri a bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. Ikike...
Led Corn Cob Ìhè 100 Watt Led Corn Cob Ìhè Led Corn Cob 480v Led Corn Cob Bulbs E27 Led Corn Cob 400w Led Corn Cob Led Corn Cob Light Bulbs Led Corn Bulb